भावविहल निशानकी आमाको चित्कार ‘बरु मलाई मारिदिएको भए हुन्थ्यो’, जीवितै उद्दार गर्न सकिन्थ्यो ! « News24 : Premium News Channel
भावविहल निशानकी आमाको चित्कार ‘बरु मलाई मारिदिएको भए हुन्थ्यो’, जीवितै उद्दार गर्न सकिन्थ्यो !
प्रकाशित मिति : Aug 08, 2018
भक्तपुर : भक्तपुरको काँडाघारीबाट आइतबार साँझ अपहरण गरिएका ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको शव भेटिएको छ ।
आइतबार अपहरणमा परेका बालक मृत भेटिएपछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको क्रममा अपहरणकारीसँग भएको मुडभेडमा दुई अपहरणकारी पनि मारिएका छन् ।
अपहरणकारी अजय तामाङ र गोपाल तामाङ दोहोरो फायरिङका क्रममा मृत्यु भएको अपराध महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए । मध्यपुर ठिमीको नहदस भन्ने ठाउँमा उनीहरुको इन्काउन्टर भएको हो । उनीहरुले आइतबार नै बालकको हत्या गरेर शव गाडेको प्रहरीले जनाएको छ । ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर–७ नगदेशस्थित श्याम लवटको निर्माणाधीन घरको गारोसँगै खाल्डो खनिएको अवस्थामा बालकको शव भेटिएको हो ।
हत्या गरिएका निशान काठमाडौँ–३२ पुरानो सिनामंगलमा रहेको हाइल्याण्ड इंग्लिस स्कुलमा कक्ष ६ मा अध्ययनरत थिए । सिन्धुपल्चोक घर भई हाल काडाँघारीमा बस्ने बालक आइतबार राति अपहरणमा परेका थिए ।
अपहरणकारीबाट एक थान पेस्तोल, दुईवटा गोली र फिरौती मागेको सिम कार्ड भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । अपहरणपछि बालकको परिवारसँग अपहरणकारीले ४० लाख रकम फिरौती मागेका थिए ।
निशानकी आमाको चित्कार
हत्या भएका बालक निशानकी आमा चमेली काँडाघारीमा खाजा पसल चलाउँथिन् । सिन्धुपाल्चोक, ज्यामिरे घर भएका उनका श्रीमान गणेश खड्का रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा छन् ।
चमेलीका अनुसार स्कुलबाट आएपछि निशान गोपालसँगै मोबाइल किन्न गएका थिए । पेन्टिङको काम गर्ने उनी पछिल्ला केही वर्षदेखि चमेलीको पसलमा खाना तथा खाजा खाने गर्थे ।
आइतबार पनि उनीहरुले वियर खाएर निस्किएका थिए । चमेलीको अनुसार उनीहरुले ४/५ बजेतिर वियर खाएर निस्किएका थिए । मोबाइल पसलमा छाडेर हिँडेका निशान अबेरसम्म नभेटिएपछि सोधीखोजी सुरु भयो । राति ९ बजेतिर आफूलाई फोन आएको र ४० लाख रुपैयाँ फिरौती मागेको चमेलीले जानकारी दिएकी छन् ।
उनले भनी- ‘मलाई फोन आयो म जान्छु दिदी भन्यो अनि गयो । बाबु आइपुगेन मैले ठाने खेलिरहेको छ भन्ने सधैँ पनि ८ साढे बजेतिर घर आउँथ्यो । म खाना पकाउन तिर लागे खान पाक्यो । बाबु टिभी हेर्न जान्थ्यो टिभी हेर्न ठाउँमा गए त्यहाँ पनि बाबु थिएन । छतमा गए छतमा पनि थिएन । छोराको खोजीमा वरिपरि लागे । मोबाइलमा एक्कासि फोन आयो । नयाँ नम्बरबाट कसको फोन आयो भनेर साथीलाई फोन उठाउन दिए । उनले मलाई नै फोन उठाउन भनेपछि फोन उठाए । कुरा केही पनि बुझिन फोन कट्यो । फेरी त्यही नम्बरबाट फोन आयो र भन्यो हामीले तपाईँको छोरालाई अपहरण गरिसकेका छै ४० लाख पैसा लिएर आउनु, पुलिसलाई खबर गर्नु भो भने राम्रो हुने छैन । भन्यो त्यहाँबाट मोबाइल भाइमा फालिदिए । त्यहाँबाट थाहै भएन ।
११ बर्षका निशान खड्का हत्या फक्रिदै गरेको ‘कोपिला’ चुँडिदाको शोक–सन्नाटामा निशानको परिवार
अपहरण पछि हत्या गरिएका ११ बर्षका निशान खड्काकी आमा र परिवारको यो हालत…फक्रिदै गरेको ‘कोपिला’ चुँडिदाको शोक–सन्नाटामा निशानको परिवार…शेयर गर्नुहोला..
Posted by Sandip Pariyar on Tuesday, August 7, 2018
घरको एक्लो छोरा, अपहरणपछि मृत्युपछि हुँदा चमेली भावविहलभएकी छिन् । चमेलीलाई आफ्नो छोराको हत्या सहि नसक्नु भएको छ । उनीहरू छोराको कहानी गर्दै रोइराखेका छन् । चमेली भन्छिन् – ‘हामीले के गरेको थियौ र रु बरु मलाई मारिदिएको भए हुन्थ्यो नि ।’ उनी भावविहल भएर भकान रहेकी छिन् ‘मेरो बाबु तिमी कहाँ गयौ, तिमीलाई यस्तो कसले बनायो ।’ उनको आखाँमा आँसु टुटेको छैन ।
गोपाल चमेलीको खाजा घरमा नियमित आउँथे र खाना तथा खाजा खाने गरेका थिए । तर, जसलाई उनले वर्षौ खाना खुवाइन्, उनले नै निशानको ज्यान लिएका छन् ।
जीवितै उद्दार सकिन्थ्यो
निशान खड्काको जीवितै उद्दार सम्भव रहेका विज्ञहरु बताउछन् । उनीहरुको रायअनुसार, प्रविधिको प्रयोगमा सहजता र प्रहरीबीच समन्वय भएको भए बालकको जीवितै उद्दारको सम्भावना थियो ।
बालक अपहरणको सूचना प्राप्त भए लगत्तै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको थियो, यस्ता घटनामा ठूलो मात्रामा सुरक्षाफौज परिचालन गर्नुले अपहृत व्यक्तिको ज्यान जाने खतरा बढी हुन्छ, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले भने।
बालक अपहरण परेको खबर पाउना साथ महानगरीय प्रहरी परिसरले मात्रै होइन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पनि घटनास्थल वरपर ठूलो मात्रामा वर्दिधारी प्रहरी खटाएको थियो । शादा पोशाकका सुराकी गर्ने प्रहरी खटाउनुपर्नेमा मुठभेडमा उत्रने जस्तो गरी वर्दिधारी प्रहरीको बाक्लो परिचालनले गर्दा अनुसन्धानमा कठिनाई भएको प्रहरीको दाबी छ ।
अपहृत बालककी आमा चमेली खड्कालाई प्रहरीले आफ्नै भ्यानमा राखेर अपहरणकारीसँग फिरौतीको ‘बार्गेनिङ’ गर्न लगाएको थियो । यसले पनि बालकमाथि जोखिम बढायो, अनुसन्धानमा संलग्न एक जना प्रहरी अधिकारीले बताए ।
शंकाको घेरामा ‘इन्काउन्टर’
बालक अपहरणपछि हत्या गरी भाग्दै गरेका दुईजनामाथि गरिएको ‘इन्काउन्टर’ विवादमा परेको छ। अपहरणपछि हत्या घटनामा संलग्न भनिएका गोपाल तामाङ र अजय तामाङको इन्काउन्टर प्रहरीले आफू ‘पपुलर’ हुन मात्रै गरेको देखिन्छ ।
आइतबार साँझदेखि अपहरणमा परेका बालक खड्कालाई प्रहरीले सकुशल अपहरणमुक्त गर्न सकेन । प्रहरीले बालकको अपहरणपछि हत्या गर्नेलाई पक्राउ गरी सूर्यविनायकको जंगलमा लगेर गोली हान्यो र त्यसलाई ‘इन्काउन्टर’ भनिदियो।
सोमबार बिहान ९ बजेतिर पुगेका प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरुकै सहयोगमा बालकको शब बरामद गरेको थियो।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले अपहरणकारीलाई भक्तपुरको सानो ठिमी क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको जनाएको थियो । तर पछि प्रहरी र अपहरणकारीबीच मुडभेटमा अपराधिको मृत्यु भएको प्रहरीले जनायो । अपहरणकारीबाट एक थान पेस्तोल र दुई गोल भटिएको समेत प्रहरीले बतायो । यसले गर्दा नि ‘इन्काउन्टर’ शंकाको घेरामा पुगेको छ ।
अपहरणकारी मारिएपछि मारिएका बालक निशान खड्काका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने र घटनाको थप अनुसन्धानको बाटो बन्द भएको सरोकारवालको भनाइ छ । घटनको सबै अनुसन्धान अपराध महाशाखाले गरेको भन्दै भक्तपुर प्रहरीले भने घटनाको थप जानकारी दिन चाहेको छैन ।
फागुको रंगमा पनि आयातकै भर, बजारमा सामान्य चहल–पहल
खुसी हुने उपायहरु
हिमपात र वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको सडकखण्ड ३ महिनापछि आयो सञ्चालनमा
विपुल क्षेत्री एण्ड ट्राभलिङ व्याण्डसहित अष्ट्रेलियामा नेपाली पर्व होलि मनाइँदै
विगतको जातीय विभेद र छुवाछूतको कुरा सम्झेर वर्तमानमा अघि बढ्न सकिँदैन : मन्त्री पण्डित
आफ्नै घरको आँगनमा खेलिरहेकी तीन वर्षीया बालिका बलात्कार गर्नेलाई २५ वर्ष कैद
access_time 12:32 pm
access_time 12:31 pm
access_time 12:25 pm
काठमाडौं । रंगको पर्व फागू पूर्णिमा भोलि काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रमा मनाइँदैछ । बिहीवार तराई–मधेसमा
एजेन्सी । ऊर्जाशील हुनुको एउटै उत्तम उपाय खुसी हुनु हो। खुसी मानिस निकै ऊर्जाशील हुन्छन्
रुकुम ।मध्यपहाडी लोकमार्गको काँक्री–बुर्तिवाङ सडकखण्ड भारी हिमपात र वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको ३ महिनापछि सञ्चालनमा